Wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo maanta ka dhacay magaalada Marka ee xarunta gobalka Sh/hoose.
on October 29 2013 Wararka naga soo gaaraya magaalada Marka ee xarunta gobalka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan in dagaal muddo kooban socday uu ka dhacay gudaha magaaladaasi, kaas oo sida la sheegay u dhaxeeyay ciidamada militeriga dowladda Soomaaliya iyo ilalada guddoomiyaha magaaladaasi Maxamed Cismaan Cali (Yariisoow).
Dagaalkaas ayaa yimid ka dib markii ciidamo ka tirsan kuwa militeriga dowladda Soomaaliya ay isku dayeen inay isbaarooyin dhigtaan gudaha magaalada Marka iyo waddooyinka soo gala, waxaan arinkaasi si weyn uga soo horjeestay ciidamada ilaalada u ah gudoomiyaha magaalada Marka iyo ciidamo madani ah oo loo sameeyay inay sugaan amaanka magaaladaas.
Israsaaseyn aan la ogeyn cidda wax ku noqotay ayaa sida la sheegay dhexmaray ciidamada militeriga ee doonayey inay isbaarada dhigtaan iyo ciidamadii diidanaa ee ilaalada u ahaa gudoomiyaha magaalada Marka, waxaana la sheegay in xaalad kacsanaan ah ay haatan ka jirto magaalada Marka ee gobolka Sh/hoose.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in gebi ahaanba la xiray ganacsigii magaalada Marka, islamarkaana dadka ay ku kala xaroodeen guryahooda iyo goobahooda ganacsi, iyagoo ka cabsi qaba inuu saameyn ku yeesho dagaalka u dhaxeeya labadaasi dhinac.
Gudoomiyaha magaalada Marka Maxamed Cismaan Cali (Yariisoow) oo ka hadlay dagaalkaasi ayaa baaq u diray saraakiisha ciidanka militeriga ee dowladda Soomaaliya, isagoona ugu baaqay inay ciidankooda ka celiyaan dhibaatooyinka ay u geeysanayaan dadka shacabka ee magaalada Marka.
Lama oga sida uu xaalka ku dambeeyn doono, waxaana xaaladda ay haatan tahay mid kacsan, iyadoona mararka qaar magaalada Marka gudaheeda laga dhexmaqlaayo rasaas oo si teel teel ah u dhaceeysa.